Tsiakoraka etsy amin’ny Piment Café
Niaraha-nahalala ny fahabangana teo amin’ny tarika Tsiakoraka, tamin’ny fahalasanan’i Doda tamin’iny taona iny. Fantatra fa haompana amin’ny fahatsiarovana azy sy i Setra, samy mpikambana mpanorina, ny faha-30 taon’ny tarika Tsiakoraka amin’ity taona ity. Ho fisantarana izany, hisy ny « cabaret » izay hotontosaina anio alina, etsy amin’ny Piment Café Behoririka. Holalovana an-kira izay taona sy sedra maro nolalovan’ny tarika izay.
Randrantelo eny amin’ny Trass Tsiadana
Ho andron’ny mozika folk sy ny hira an-gitara mihitsy ny anio alina. Mbola manome fotoana ireo mpankafy izany eny amin’ny Trass Tsiadana mantsy ny tarika Randrantelo, anio manomboka amin’ny 9 ora alina. Mazava loatra fa hiompana amin’ny famerenana ny hiran’ireo mpanao vazo an-gitara, indrindra ireo hira malagasy ny fiarahana. Misy ihany koa anefa ireo hira vahiny, fanaon’ny tarika Randrantelo.
Lejim 415 eny amin’ny Jao’s Pub
Hiverina indray, rehefa tsy heno elaela i Lejim 415. Hanafana ny fotoana eny amin’ny Jao’s Pub Ambolonkandrina ity mpanakanto zanak’i Mandritsara ity, anio alina. Hoentiny an-tsehatra indray ireo hira nahafantarana azy amin’ny gadona samihafa toy ny salegy, bahoejy, sns. Anisan’ny nahafantarana ity mpanakanto ity ny «Giana», «Lera mody», «Anao raiky mahasitrana zaho». Hitondra fofompofony amin’ireo sanganasany vaovao ihany koa i Lejim 415.
“Feo roa, gitara roa”, etsy amin’ny CCEsca
Araka ny efa nanampoizana azy, efa lany avokoa ny tapakila ho an’ny seho voalohany hataon’i Dama sy Erick Manana anio. Ankavitsiana ihany koa sisa ny tapakila amin’ny seho faharoa, ny alahady tolakandro izao. Efa vonona tsara kosa i Erick manana sy Dama, hanolotra ny “Feo roa, gitara roa”. Toraka izany koa ireo vahiny nasaina manokana, dia i Jenny Führ sy Voara ao amin’ny tarika Fangia Kalo Gasy.